KPET DR6500 Vet wemhuka dzinovaraidza mhuka digitaalinen radiography X ranzi kuri DR midziyo hurongwa - China HD Medical Technology
KPET DR6500 Vet wemhuka dzinovaraidza mhuka digitaalinen radiography X ranzi kuri DR midziyo hurongwa
Standard namaapuro mubhedha pemvura pamwe rakasiyana-siyana chikumbiro zvakakodzera inspections vose diki, svikiro nezvikuru. The yepamusorosoro ematongerwo zvinhu zvinoshandiswa kuti mubhedha pemvura, uye mashoko ane muvare nemishonga pfuma uye zviri nyore kuchenesa. The chipimo chemushonga kupedza X-ray yakaderera.
Chizvarwa chitsva guru kukura digitaalinen sandara paneeli detector pasina splicing, kuti detector makuru kukura "17 × 17" amorphous nesilicon (Pixel size: 127 μ M uye mufananidzo kutora nguva: 4 ~ 6 seconds) ari kutorwa ne yepakutanga kavha kubva Korea uye unozadzisa kutungamirira rwokugadzira pamwero munyika yose. Rine yepamusoro kugadzikana uye kwemupfungwa reshiyo uye ane zvinhu yepamusoro, upenyu hurefu, yepamusoro kuita mari reshiyo panguva imwe chete, nokudaro musangano chiremba kushandiswa uye chichisunungura vanhu pasina kunetseka.
Pane panozogadzirika mufananidzo kubudiswa michina kubva HD Medical uye otomatiki hwindo ugadzirise, ruzha rutapudzo uye otomatiki hutachiwana zvinogona kuitwa mumufananidzo. The simba mufananidzo kubudiswa basa zvipo zvakanakisisa migumisiro enhancement, kuti mupise, uye ruzha rutapudzo.
Support Work List hurongwa:
Rine mabasa kuti mufananidzo kutora, kuwedzera uye rutapudzo mufananidzo, kuchinja kuti mufananidzo nokubwinya, kuchinja kuti mufananidzo Asi mufananidzo kutenderera, mufananidzo flips uye VHS chipimo; The workstation ane mashandiro otomatiki kuchengeteka negadziriro yeparutivi kuitira mufananidzo, kunotsigira modes kuti nzira chete kana Dual nzira; The Dicom3.0 mufananidzo Kupfuudzwa, kubvunza, ridhindwe, kudhinda anogona kuitwa ino. DR Hurongwa anogona kutarisira murwere uye nomufananidzo ruzivo;
Flat Panel detector Japan Toshiba, 17 '+ 17' Amorphous nesilicon (FPD) necesium iodide 1 seti
Work chiteshi: Technical kombiyuta mugwaro, 2M HD pfumbu pakafunuka chidzitiro 1 seti
Software Original kupinza Software kuti mhuka 1 seti
Animal mubhedha No.7 mubhedha, remadziro anogona kuenda mana nhungamiro chubhu Mbiru kwira uye pasi magetsi 1 seti
High voltage jenareta 220V, 320MA, 32KW 40-150kv Made in China (Neusoft muchiso) 1 PC
X ranzi chubhu rainyanya kukosha: 0,6 * 1,2 Tube voltage 40-150KV. Toshiba muchiso 1 PC
Laser firimu purinda Kodak 5700C 1 PC
Paper mushumo purinda va neruvara 1 PC
Filter afoot Kupinza JPI, 203 waya, yakakwirira batana afoot 1 Isai
Touch sikirini HD Medical 1 PC
Post-kugadzira basa chiteshi Computer ne-software 1 Isai
Remote trolley 3KW Ups upfu, anogona kufamba uye pasi.
turusi bhokisi HD Medical 1 Isai
High voltage wire 75KV 2PCS
Power wire Two danho 3wires 1 PC
Collimator Special nokuti Animal 24V 1 PC
Power gudzazwi: Made in China 1 Isai
vamwe Kurongedza atorwa, pasi waya 1 Isai
Previous: KPET DR6000J Vet wemhuka dzinovaraidza mhuka digitaalinen radiography X ranzi kuri DR maitiro
Next: KPET DR6500J Vet wemhuka dzinovaraidza mhuka digitaalinen radiography X ranzi kuri DR mudziyo hurongwa
Hot Nokutengesa Veterinary Digital Radiography
Veterinary chirwere kuri Table
Veterinary kuri Equipment
Veterinary waTabeeri For X-Ray
KPET DR5500J Veterinary dzinovaraidza mhuka digitaalinen radi ...
KPET DR6000J Vet wemhuka dzinovaraidza mhuka digitaalinen ...
KPET DR6500J Vet wemhuka dzinovaraidza mhuka digitaalinen ...
KPET DR4500J Veterinary dzinovaraidza mhuka digitaalinen radi ...
KPET DR4500 Veterinary dzinovaraidza mhuka digitaalinen redhiyo ...
KPET DR3500 Veterinary dzinovaraidza mhuka digitaalinen radi ...